Maqaallada C/Risaaq Koronto oo Laga Joojiyey SomaliTalk.com
SOMALITALK - OGEYSIIS
OGEYSIIS: AKhristayaasha SomaliTalk.com
Baaritaan ku socda qoraal uu soo tebiyey awgeed, waxaa Cabdirisaaq Koronto laga joojiyey in uusan wax maqaal iyo war ah u soo tebin karin SomaliTalk.com ilaa laga hubsanayo xaqiiqada warka uu soo tebiyey. Qoraalka keliya oo uu soo tebin karo hadda waa caddayn laga sugayo qoraalkii uu soo qoray xaqiiqadiisa.
Qoraalkaas uu soo qoray oo uu cinwaan uga dhigay "Shiikh C/qaadir Nuur Faarax oo ku celiyay lacagbadan shirkada NEC kaasi oo ay shirkadu ugu deeqday dhismaha masjidka maxay tahay sababtu?" haddii ay caddaato in uu buurtay Sheekha iyo Shirkadaba, waxaan akhristayaasha u cadayneynaa in uusan qoraal dambe, maqaal, faallo iyo wartoona u soo diri doonin SomaliTalk.com.
Waxaan siinay C/risaaq Koronto fursad uu ku caddeeyo isha uu ka helay warkaas, haddii aan helo jawaabtiisa oo cadayn leh halkan ayaan ku soo qori doonaa insha Allah.
SomaliTalk.com waxaa u degan qoraagii soo tebiya maqaal been abuur ah oo uusan cadayn u ahayn in aad dib dambe looga aqbalin qoraal dambe. Balse marka hore waxaa qoraaga la siiyaa fursad uu ku cadaynayo qoraalka hore, haddii uu keeni waayo macneheedu waxaa weeye been abuur aan loo dul qaadan karin, oo sababeysa in dib dambe qoraal looga qaadan.
Saxaafadda waxaa ka reeban in qof bini aadam ah lagu been abuurto. Qofka madaxda ah ama shirkadaha haddii lagu hayo musuqmaasuq waa in wax cad la soo bandhigo, waana midda looga baahan yahay qoraaga maqaalkani khuseeyo in uu jawaab ka bixiyo.
Waxaan qormadan soo qornay kaddib markii aan jawaab degdeg ah ka weyney qoraaga qormada soo qoray ee kor ku xusan, laakiin weli wey u furan tahay fursada dhankiisa uu ku cadaynayo.
Fiiro Gaar ah: Taas macneheedu waxaa weeye in aan si madax bannan u baareyno arinta warkaas ku saabsan, si akhristayaasha ay xaqiiqada u ogaadaan.